Udliwanondlebe noMalenka Ramos. Imibuzo eli-10 kumbhali we The Whisperer | Uncwadi lwangoku
Udliwanondlebe noMalenka Ramos. Imibuzo eli-10 kumbhali we-Whisperer
Ifoto ngoncedo lukaMalenka Ramos.
Namhlanje ndithetha nombhali we-Asturian UMalenka Ramos, endidibene naye kwezi yunivesithi ndibulela ulonwabo oluqhelekileyo lwaseNordic: ugxa wam uJo Nesbø, owenza nokunxibelelana nabahlobo phaya ndingazi. Kwaye kufuneka enkosi kwangaphambili ngempendulo yakho kwangoko kunye nobubele ukuphendula le mibuzo.
Umbhali, enye yeefayile ze- Izityhilelo ezinkulu kulo nyaka nezona ziphumeleleyo ngenoveli yakhe yamva nje, Lowo uhlebayo, sixelele ngeyakho umkhondo, yakho izinongo zoncwadi, zabo iindlela zokuzonwabisa, yakho ufundo, yakho iiprojekthi kunye nombono wakhe wendawo yokupapasha yangoku. Enkosi.
1 UMalenka Ramos
2 U dliwano
2.0.1 1. Uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
2.1 2. Yeyiphi incwadi yokuqala ekubethileyo, kwaye ngoba?
2.2 3. Ngubani umbhali wakho omthandayo? Unokukhetha ngaphezu kweyodwa nakwezinye iindawo.
2.3 4. Nguwuphi umlinganiswa osencwadini obungathanda ukudibana naye uze umenze?
2.4 5. Ngaba kukho naziphi na izinto ozithandayo xa kufikwa ekubhaleni nasekufundeni?
2.5 6.Kwindawo yakho oyikhethileyo kunye nexesha lokwenza oko?
2.6 7. Nguwuphi umbhali okanye incwadi ephembelele umsebenzi wakho njengombhali?
2.7 8. Zeziphi iintlobo ozithandayo?
2.8 9. Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
2.9 10. Ucinga ukuba imeko yokupapasha yenzelwe ababhali abaninzi kangakanani ukuba bakho okanye bafuna ukupapasha?
Umbhali ebalini nakwiiforamu zamabali amafutshane, Yenza i-trilogy Ukuziphindezela ukubheja nje: ukubhala malunga nohlobo olunzima njengoko kunzima, ezothando. Kunzima kuba ekugqibeleni igqityiwe ukuba ibe ngumsebenzi weminyaka emithandathu, esekwe kumabali athe aba nawo ezigidi zabafundi kumnatha. Ngeso sizathu zenziwe iincwadi zeli bali lahluke kakhulu nelinempikiswano.
Nangona kunjalo, umsebenzi wakhe awukhawulelwanga kuhlobo lwenkanuko, kodwa ixesha elide kwaye nasezithunzini ubhalile ezonwabisayo kunye neenoveli ezahlukeneyoAbalinganiswa bakhe baqhubeka nokugcina loo nto ayixubileyo kwaye wayidibanisa kwiincwadi zakhe: Ubundlobongela bomntu, icala lakhe elimnyama, kunye nolo thando ezenza ukuba zibe zezokwenyani kwaye zibe nakho ukwenza ukuba umfundi ofunekayo awele eluthandweni. Ngelo xesha Inikezelwe ngokukodwa kwizinto ezoyikisayo kunye noncwadi oluyimfihlo. Iinoveli zakhe zamva zezi: Yintoni ehlala ngaphakathi y Lowo uhlebayo.
Lo nyaka ibe ngu ophumeleleyo Ukhuphiswano lweeTaboo'ks Umthendeleko we-Sitges ngalo msebenzi wokugqibela.
1. Uyayikhumbula incwadi yokuqala oyifundileyo? Kwaye ibali lokuqala olibhalileyo?
Ndikhumbula iincwadi zokuqala endizifundileyo: I-Iliad, endingakhange ndifunde malunga nesiqingatha sebali kuba incinci kakhulu. Abahambi abonwabileyo, evela kuLerme, AmagqwirhaNgu Roald Dahl… Ndifunde iincwadi ezininzi ngo I-Steamboat ukuba ndilahlekelwe kukudluliselwa ukusuka kwenye indlu ukuya kwenye.
2. Yeyiphi incwadi yokuqala ekubethileyo, kwaye ngoba?
Kunzima ukothuka kuba ndiyathanda ukufunda zonke iintlobo zoncwadi, kodwa kufuneka ndivume ukuba xa ndandimdala -ninzi kakhulu-, inoveli ka-Anne Rice yandivuthulula Ukuya eden. Andizukuxelela isizathu sokuba ugcine amaqhinga.
3. Ngubani umbhali wakho omthandayo? Unokukhetha ngaphezu kweyodwa nakwezinye iindawo.
Ndineqela: U-Anne Rice, uJo Nesbø, uJoe Abercrombie, uDickens, uAlgernon Blackwood, UPaul Temblay, uAdam Nevill, uPeter Kolosimo… Zonke zahluke kakhulu kuhlobo lohlobo kunye nesimbo sokubhala.
4. Nguwuphi umlinganiswa osencwadini obungathanda ukudibana naye uze umenze?
Ewe, kwenzeka into efanayo kum njengakwiinoveli, ndinazo eziliqela inika umdla kakhulu. Ndiyabathanda abalinganiswa bakaJoe Abercrombie, othatha i-adventure kunye noburharha obumnyama kumanqanaba aphezulu. Kananjalo ezo zika-Anne Rice zothando olumnyama kunye nokulwa kwakhe okukhoyo, kwaye uJo Nesbø ukugubungela ngokwenyani kunye nokuluhlaza ... UMonza murcatto NguJoe Abercrombie, Ingalo Ngu-Anne Rice, UHarry hole Ngu Jo Nesbø kunye UJohn uyathula nguBlackwood.
5. Ngaba kukho naziphi na izinto ozithandayo xa kufikwa ekubhaleni nasekufundeni?
Sebenzisa Iincwadana ezithile zokubhala amanqaku kunye nokulungiselela inoveli. Iincwadana ezinemibala emi-A5 ubukhulu.
6.Kwindawo yakho oyikhethileyo kunye nexesha lokwenza oko?
Ixesha lokufunda okanye ukubhala kuxhomekeke kwimpembelelo yam. Ukuba ndikwincwadi yenoveli, ndingachitha yonke imini ndibhala okanye ndiphanda ngebali lam. Ndinekhaya elinye igumbi eligcwele iincwadi elinetafile kunye nesihlalo sokufunda. Ndiyathanda ukufunda ebusuku. Ndihlala ndizama ukuyigcina injalo, nangona ndihlala ndiphethe incwadi engxoweni yam ukuba kunokwenzeka ndibenexesha elincinci emini.
7. Nguwuphi umbhali okanye incwadi ephembelele umsebenzi wakho njengombhali?
Kulungile ndiyacinga ezininzi kwaye zixhomekeke kwibali. U-Anne Rice, ixesha elide ukususela ebusheni bam, wayengumbhali ophambili endimele ndimbulele ngothando lwam lokufunda. Nangona kunjalo, isitayela ngasinye siphuma sodwa. Ndiyathanda kakhulu Ibali likaAlgernon Blackwood kwaye bendihlala ndifunda ibali ngaye xa kufuneka ndingene kwimeko epanormal.
8. Zeziphi iintlobo ozithandayo?
Imfihlakalo, uloyiko, umdla.
9. Ufunda ntoni ngoku? Ukubhala?
Ndiqala ngenoveli ye UJoe Hill, Fuego, kunye nezinye Amabali ama-Victorian ngu-Emilia Pardo Bazán. Ndigqibile inoveli eyimfihlakalo umshicileli wam kwaye ndizifumana ndikwinkqubo eyoyikekayo "I-detox yeMbali" ukuqala enye.
10. Ucinga ukuba imeko yokupapasha yenzelwe ababhali abaninzi kangakanani ukuba bakho okanye bafuna ukupapasha?
Las Izaziso Ezi zivela kwintetho yokugqibela eFrankfurt zincinci eyoyikisayo, yonke into kakhulu
cwaka. Akukho ntshukumo ingako. Oko ngokweenguqulelo. Ngokubhekisele kwi papasho Kwilizwe lethu, Ndibona ubulumko. Ubuncinci ndiyaziva.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » Udliwanondlebe noMalenka Ramos. Imibuzo eli-10 kumbhali we-Whisperer
Yeyiphi incwadi oyibhalileyo oyithanda kakhulu? Wenza ntoni ukuze ugqibe iphepha elingenanto?
UMarco Tulio Cicero noRobert Graves. Ukusuka eRoma naseRoma egazini.
I-misiscellany yamagqwirha, oosiyazi, izicakakazi, i-vampires, iinqanawa kunye neekati